အလှကုန်အပြောင်းအလဲ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုဘယ်လိုတွက်ရမလဲ? - နှုတ်ခမ်း | မျက်စိ Cream| facial မျက်နှာဖုံး |L ကို Otion | facial Cream | မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ OEM / လိမ္မော်ရောင်, လက်ကားအရောင်း
နေအိမ် » အလှကုန်အပြောင်းအလဲ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုဘယ်လိုတွက်ရမလဲ?
Second, the quality of packaging materials There are two types of packaging materials, inner packaging materials and outer packaging materials. The inner packaging materials are generally glass bottles, plastic bottles, hoses, စသည်တို့ကို, and the outer packaging materials are generally paper packaging boxes. Brands can also provide internal and external materials by themselves, as long as the cosmetics foundry processes and produces the internal materials and then fills and packages.